War Deg Deg Ah: Weerar Ismiidaamin ah oo lagu qaaday Hotel Dayah iyo Rasaas xoogan oo socota – STAR FM SOMALIA
Waxaa goordhaw Weerar Ismiidaamin ah lagu qaaday Hotelka Dayah ee kuyaala inta u dhaxeysa Isgoosyada Sayidka iyo Dabka ee magaalada Muqdish o.
Qaraxa ayaa ahaa mid aad u xoog badan si weyna looga maqay magaalada Muqdisho , waxaana qaraxa kadib bilaabatay rasaas xoogan oo laga maqlayo aaga Hotelka Dayah, waxaana loo maleenaya ain rag hubeesan gudaha u galeen Hotelka.
Waxaa jira qasaaro aad u badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn inta ay la egtahya qasaaraha, waxaana hada Hotelka aagiisa gaaray gadaiidka Amplaasta iyo ciidamo gurmad ah.
Wali lama oga qasaaraha ka dhashay Weerarkan Daqiiqado yar kahor lagu qaaday Hotelka Dayah oo kamid ahaa Hoteelada ugu waa weyn ee magaalada Muqdisho, xaalada aaga qaraxa ka dhacay ayaana ah mid aad u kacsan.
Waxii Warar ah ee kusoo kordha kala soco Wararkayaga dambe Indsha Allah
Wararkii ugu dambeeyay dagaal saf ballaaran oo Shabaabku ku qaadeen Degmada Afgooye